Indonesia in Focus: Og Ilaah iyo aadanaha dembiga oo keliya ka dhasha.
Og Ilaah iyo aadanaha dembiga oo keliya ka dhasha.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (354)
(Qaybta saddex boqol iyo konton iyo afar), Depok, West Java, Indonnesia, August 21, 2015, 20:27 pm).
Ilaah in warqad aayadda Fatir 18 ka digay dadka in dembiyadii qof ayaa ka masuula oo intuu waa in lala xisaabtamaa Ilaah hortiisa in Aakhiro, oo dembiyadiinna oo ka mid ah aan la qaado karaan dadka kale, ama ay wax dad ah, oo ay ku jiraan Nabiga iyo Rasuulkiisa.
In diinta Islaamka sida erayga Ilaah in warqadda Fatir, in nebi ma (Rasuullo) in dhali karin dembiyadii oo kale.
Quraanka wuxuu ahaa Kitaab kaliya in Ilaah ballan qaaday siidaayay iyo keasliannnya hayo tan iyo Maalinta Qiyaame (sida ku cad Quraanka iyo Sunnaha).
Warqad Fathir Aayaadka 15-18
Tarjamada warqad Fathir Aayaadka 15-18
15.  Dadow Idinku waxaad tihiin kuwa u baahan tahay Ilaah, Eebana waa kan Mahakaya (uma baahnid wax kale), ee la mahdiyo .
16. Haddii uu, uu idin wada baabbi'in doonaa lana imaan karo khalqi cusub (si aad u bedeli) .
17. Oo sidaas daraaddeed ma adag tahay Eebe.
18 Oo anigoo dembi ma uu qaadan doonaa dembiyadii dadka kale . Oo haddii qof dhibteen miisaanka uu dembi wac (dadka kale) si ay rar ka ma noqon korkiisa yar, inkastoo (iyadu waxay ugu baaqaysaa) qaraabada . Sida xaqiiqada ah hadaad u digto karaa oo kaliya ciddii ka cabsan (Cadaabka) Eebe, (inkastoo) iyagu ma ay isaga  iyo kuwa Ooga Salaadda  arko. , Ruuxii isdaahiriyana , dhab ahaantii waa inuu isaga daahiriyaa isaga u gaar ah u fiican. iyo in Eebe yahay meel ka dib . -
Ilaah aqoon SWT
Mudnaanta kiiska ku xiran tahay aqoonta baratay farshaxanka. Sababtoo ma jirto wax ka sharaf badan Eebe Subhanahu wa imtithaal, markaas sayniska waa sayniska ogaansho Eebe ugu qaali ah. Eebana waa ogyahay sida ay u la samayn karaa iyada oo:
• Aayaadka kauniyah (calaamadaha haybad Eebe ee koonkan ama khalqiga oo dhan), iyo
• Aayaadka Syar'iyah (calaamadaha haybad Eebe, ee uu Shareecada ama diinta).
Helitaanka in la ogaado Alle waxa ka mid ah afar qaybood:
1. Ogow jiritaanka Eebe.
2. Yaqaana rububiyah kelinimada Alle.
3. Ogow midnimada uluhiyah Eebe (xuquuqda Eebe diibadahi)
4. Ogow magacyada iyo sifooyinka Alle
Qaybta afraad waa midnimo ah, waa in aan la kala saari. Halkan waa sharaxaad gaaban oo ka mid ah afar xaaladood oo kor ku xusan.
1. Ilaah aqoon WAA SWT
Waa in aan aaminsanahay in Eebe, wax abuura ee la abuuray oo dhan si dhab ah ka jirin, inkastoo aan marnaba la kulmay, arkay, toos maqlay. Badan oo dood ah in tani ay muujiyaan. Ka mid ah hadalka Eebe Subhanahu wa imtithaal:
Ma waxay ku abuuray by waxba (ie, iyada oo aan wax abuura a), ama haddii ay la abuurayo (naftooda)? [Ath-aroornimadii Khamiistii / 52: 35]
Taasi waa, xaaladda aadanaha ama noole ah ee hadda jira aan la kala saari karaa mid ka mid ah sadex duruufood:
a. Waxay ka jiraan oo aan Abuuraha. Tani waxay suurtogal ma aha. Ma jiro dareen caadi ah u cuntami waayey in ay wax jiro oo aan la sameeyey.
b. Waxay isu abuuro. Waxaa mar dambe waa suurto gal. Maxaa yeelay, sida waayeen wax aan asal ahaan waxaa uu ahaa in la abuuro wax kalana ahaa.
c. Tani waa xaqa ah, in Alle ayaa abuuray, waana abuur badane ah, Qaadirka, Wadaagana ma jiro isaga.
Baadiyaha ah Arab weydiiyay, "Waa maxay xujada jiritaanka Alle?" Waxa uu ku jawaabay, "Subhan Eebe (ka Nasahanyahay Eebe)! Illeen xaarka geel tilmaamaya joogitaanka geel, raad muujinaysaa safarka! Markaasaan samada leeyahay xiddigaha, dhulka uu leeyahay waddooyinka, badaha leeyihiin mowjado, ma aha in tilmaamaya al-Latif (Alle Good) al-Khabir (oge). "
Imaam Axmed rahimahullah weydiiyay oo ku saabsan arrintan, waxa uu ku jawaabay, "Waxaa jira qalcaddayda xoog leh, oo siman, ma albaabada iyo daaqadaha. Bannaanka cad silvery, waxaa dahab saafi ah sida. Marka xaaladaha noocan ah, derbiyada lama filaan ah kala qaybsan tahay, ka dibna aad u hesho baxay waxaa ka mid xayawaan in maqli karaan oo ay u arkaan, ayaa qaab qurux iyo cod melodious. "
Taas oo loola jeedo Imaam Axmed waa digaag ka soo baxaya ukuntooda. [Eeg Tafsir Ibn Kathir, warqadda al-Baqarah, aayadda 21]
Aaminsan in Real abuura, Alle, waa u khuduuca fithrah. Sidaa Fircoon, oo xataa Ibliiska, ayaa sidoo kale rumaysan tahay. Allah Subhanahu wa imtithaal ku saabsan Fircoon iyo Qoomkiisa loo Beeniyey mucjisada Muuse Alaihissallam:
Oo iyagu (Fircoon iyo Qoomkiisa), maxaa yeelay, Dulmi iyo Isla Sarreeyn diidi Quluubta (qiyaamada) marka ay rumaysan yihiin (xaqa) iyada ah. Sidaas day siday noqotay cidhibtii kuwii ha u halligantaan aawadeed. [An-Naml / 27: 14]
Sidaa darteed, waa ma aha oo keliya qof rumeeya Eebe ka dhigan tahay in uu yahay Muslim ah ama Mu'min ah.
2. dhac ah Lordship Ilaah aqoon SWT
Rububiyah waa in aan rumeynin dhac Eebe, kuwaas Eebe kaliya oo la abuuro, gaar, gacanta, iyo maarayn khalqiga oo dhan. Kaliya Eebe Ilaaha Qaadirka ah oo ku noqon, dami, siinta rizqi, wanaagsan, masiibaan ku soo dejin. Ma jiro jaal Eebe Ilaaha Qaadirka ah in dhammaan xaaladaha kor ku xusan, ama malaa'igaha, nebiyada, quduusiinta, Converter, ruux, ama dad kale.
Lordship (abuuro, iyo nidaaminaya / gacanta) caalamka oo dhan cidaan Eebe ahayn maleh. Ilaahay wuxuu leeyahay,
Mahad Eebaa iska leh, Rabb (hanta, Qaadirka) caalamka. [Al-faataxada / 1: 2]
Nooca tawxiid aan la beeniyay Mushrikiinta wakhtiga Nabiga, xataa iyana way galin, sida ku qoran by aayaadka qaar ka mid ah al-Quraanka. Waxyaabaha kale, hadalka Eebe Ilaaha Qaadirka ah.
"Waxaad dhahdaa, yaa arsaaqa in aad ka samada iyo dhulka, ama qof loo (abuuray) maqalka iyo aragga, iyo kuwa soo saaray nool ka dhintay iyo kuwii dhintayna wax nool ah, iyo kuwa u maareeyaan arrimaha oo dhan" Markaasuu Iyagu (ee Mushrikiinta jaahiliinta) ayaa ku jawaabay, "Allah" Markaas dhihi. "maxaad isaga kama aanan baqeen (Xagiisa)" [Yunus / 10: 31]
Sidoo kale, Devil aqoonsan, waxa uu qiray in Eebe ka mid ahaa in laga abuuray dabka.
Ilaah wuxuu yidhi, "Ma waxaad ka baxsan si ay u Sujuuda (Aadam) markii aan kuu sheegay?" Markaasaa Ibliisku wuxuu ku jawaabay, "Anigu waxaan ahay fiican, waayo,. Waxaad iga abuurtey naar ahaa isaga waxaad Abuurtay isagoo dhooba" [Al-A'raf / 7: 12]
Sidaa darteed, qof ayaa aaminsan in midnimada Eebe iyo awood ma la odhan karaa waa Muslim ah ama Mu'min ah ilaa uu aaminsan yihiin in dhac Eebe uluhiyah, sidoo kale waxa ay aaminsan yihiin magacyada iyo sifooyinka Alle, sida hoos ku macnayn doonaan.
3. uluhiyah kelinimada Ilaah yaqaaniin (HIS XUQUUQDA DIIBADAHI).
Waxaan aaminsan nahay in ay diibadahi xaq kaliya Eebe Subhanahu wa imtithaal. Waa inaanu bixin wax caabuda Eebe ka sokow, inkastoo laga abuuray waa soo dhow, sida malaa'igtii ama Rasuul Eebe Ilaaha Qaadirka ah. Waxaa intaa dheer, dhul socod falan iyaga ka hooseeya, sida: dadkuba, Jinni, xoolaha, dhirta, dhagaxyo, hub, meerayaasha, xiddigaha, ama wax kale.
Ifayo waa macnaha ay tani ku jira erayada la ilaha takbeer, maxaa yeelay, macnaheeda ma aha diibadahi xaq u Eebe ka sokow. Waxa uu Ilaaha Qaadirka ah wuxuu leeyahay,
Adiga keligaa ayaa ibadahi waxaad tahay iyo annagaba caawimaad. [Al-faataxada / 1: 5]
Waxaad dhahdaa, "Sida xaqiiqada ah in lay waxyoodo ahaa," Bal eega Ilahmu (aad ibadahi) waa mid ka mid ah Ilaaha runta ah, ka dibna ha aad dhiibay (oo xun) "[Al-Anbiya '/ 21: 108].
Aaminsan Uluhiyah in dhac Eebe (uu xaq u leeyahay in diibadahi) Tani waa muhimka ah ee rasuullada oo dhan ku wacdiyi jiray. Markaasaa waxaa taas loo diido oo ay gaalada iyo gaalo. Ilaahay ayaa sheegay.
"Waxayna layaabeen sababtoo ah ay soo gaareen ka dige (Nabi) iyaga ka mid ah, waxayna dhaheen gaaladii," kani waa sixirroow beenaale ah "Maxay ku dhacday Mid ka mid ah oo keliya ilaahyadii ilaahyada sameeyo, arrintaasi waa run.. . -Right wax lala yaabo [Shad / 38: 4-5]
Ujeedada hordhaca ah ee u dhac Eebe uluhiyah tani waa inaynu isjeclaanno Eebe, Hogaansameysaan in, cabsi gelin iyo rajo isaga, iyo dhac caabuda in.
Waxay Caabudaysay oo Eebe waa kuwa is-hoosaysiiya oo addeecay inuu Allah Subhanahu wa imtithaal dar buuxa, gurdanka, naxariis filan, iyo cabsida cadaab. Taa waxaa lagu helay fulinta amarka Eebe Ilaaha Qaadirka ah oo ka fog ganaax.
Baaxadda cibaadada in uu yahay oo dhan waa la jecel yahay oo wuu u duceeyey Eebe Ilaaha Qaadirka ah, oo ah qaab erayada iyo perbuataan, oo ku dhashay iyo maskaxda.
Caabudina ayaa la aqbali doonaa Eebe laba shardi, kuwaas oo daacad ah oo mutâba'ah. Celinno, kuwaas oo: doonid raali ahaanshaha Eebe keliya, halka mutâba'ah, kuwaas oo ay raacaan Sunnah ah (waxbarista) Nabi Muxammed.
Sidaa darteed, dad Ilaahay rumeeyey dhac Eebe xaq u diibadahi, isagu wuxuu kor u bixin doonaa nooca cibaadada isagaana u kali yeelaynaa. Waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee cibaadada addeeci buuxda rajada iyo cabsida, jacaylka in la socda gudbinta buuxda; Salaadda; Danta cibaadada (daacad ah); gawraca xoolaha; cabsida, trust, iyo kuwa kale.
4. MAGACYADA YAQAANAY iyo nooca ahu
Oo kuwaasu iimaanka iyo go'aan ka dhan ah magacyada Alle iyo sifooyinka uu, oo dhammaantood ku yaal kitaabkii al-Quraanka iyo Sunnaha yihiin kuwo dhab ah, oo aan la dhigo ummadda.
Ilaahay ayaa sheegay,
"Waxa ay iska leh Eebe Asma ul Husna-, ka dibna isaga bermohonlah adigoo wacaya Asma ul Husna-iyo tinggalakanlah kuwa laga daayo runta ah ee (call) isaga magacyada. Later ay lagu Abaal marin Eebe waxay samayn [al-A'raf / 7: 180].
Ma jiraan wax isaga la mid ahu waa, Eebana waa ka maqla, ee arkaya wax kasta. [Ash-Shura / 42: 11]
Dhab ahaan yaa Eebe Subhanahu wa imtithaal cid og wax walba, oo ay ku jiraan ugu ogaato oo ku saabsan Eebana waa Alle oo keliya. Ilaahay wuxuu leeyahay,
Waxaad dhahdaa: "Ma waxaad tahay ogyahay ama waa Alle?" [Al-Baqarah / 2: 140]
Sidoo kale, inta badan ka ogaato Eebe ka mid ah u dhexecya Joogo Rasuulkiisii. Sidaas daraaddeed sharaxaad ka mid ah rasuullada Alle waa Xaq ah. Iyadoo erayadii gaalada iyo Mushrikiinta Eebe idmo looga shakisan yahay. Eebe wuxuu leeyahay,
Quduusyada, Rabbiga oo uu leeyahay geesinimo ah waxay dhihi, oo si fiican u la siinay ku dul ay Rasuulladu, iyo mahad waxaa iska leh Eebaha Eebaha Caalamka ah ayaa qayliyey isagoo aad. [Ash-Saffat / 37: 180-182]
Sidaa darteed aqoonsan magaca iyo dabiiciga ah ee Alle uu yahay oo kaliya muujin. Imaam Axmed scw rahimahullah yiri Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii:
Illeen Eebe iyo cirka adduunka
Eebe waa lagu arki doonaa Maalinta Qiyaame,
Waxaana la mid ah xadiisyada, "Waxaan aaminsanahay oo isaga iyo qiil, aan (kuwa baryi) sida, iyada oo aan (set) macnaha (dadka kale), iyada oo aan wax ka mid ah iyagoo gaala ah. Oo waxaynu og nahay in wax alla wixii ay u keentay Nabiga n waa Haq Annagu ma diidi Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii. Oo waxaannu ma mensifati Eebe ka badan wuu iska qalma iyada oo aan xayiraado iyo dhammaad ma leh. (Eebe Ilaaha Qaadirka ah ayaa sheegay in :)
Oo waxaynu odhan (oo ku saabsan nooca Eebe) sida uu yiri; Our kala soocista isaga oo dhan guryaha in Eebe u isticmaalaan kala soocista qudhiisu ka mid ah; Oo annaguna ma xad-xadaynta. Iyo penyifatan dadka isaga oo aan u qalmo ilaa uu nuxurka. Waxaan aaminsan nahay al-Quraanka wax kasta, labada muhkam (taasoo la micno ah ma cadda) iyo mutasyabih (taasoo la micno ah caddayn). Oo annaguna waxaannu kugu tuuri maayo isaga ka dabiiciga ah ee ka mid ah guryaha uu sababtoo ah karaahiyada ah ee uu sameeyey-up, annaga oo aan encroach on Quraanka iyo al-Xadiiska. Oo annaguna ma oga halkii se ahayn si ay ugu qiil Rasuulka n oo qarka u saaran al-Quraanka. "[Lum'atul I'tiqad, p. 3]
Kuwani waa qaybo u yaqaanaan in ay xaqa Eebe, rumeeyana isaga. Waxaan rajeyneynaa in sharaxaad tan ku darayaa in aqoonta oo dhan oo naga mid ah, oo Eebe mar walba na hanuunin jidka toosan. Aamiin.
[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 02 / Year XVI / 1433H / 2012M ah. Publishers Guddiga Joogtada Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57 183 Tel. 0271-858197 Fax 0271-858196]
18 Oo anigoo dembi ma uu qaadan doonaa dembiyadii dadka kale . Oo haddii qof dhibteen miisaanka uu dembi wac (dadka kale) si ay rar ka ma noqon korkiisa yar, inkastoo (iyadu waxay ugu baaqaysaa) qaraabada . Sida xaqiiqada ah hadaad u digto karaa oo kaliya ciddii ka cabsan (Cadaabka) Eebe, (inkastoo) iyagu ma ay isaga  iyo kuwa Ooga Salaadda  arko. , Ruuxii isdaahiriyana , dhab ahaantii waa inuu isaga daahiriyaa isaga u gaar ah u fiican. iyo in Eebe yahay meel ka dib .
Posted by needsjobslowongankerja at 3:13 PM